Funda amalungelo ku-Google AmaSpredishithi > UVielhuber David
Funda amalungelo ku-Google AmaSpredishithi04
Lapho usebenza ne- Google AmaSpredishithi , imithetho emihle, esuselwa kumsebenzisi yokuhlela amakhasi okusebenzela, amakholomu nemigqa kungachazwa ngaphakathi kwespredishithi. Ngeshwa, ayikho indlela yokuvimbela amalungelo okufunda. Kodwa-ke, lokhu kungasiza kakhulu ezimeni eziningi. Ngakho-ke ukhombisa kuphela amakhasimende akho lawo mathikithi abawakhathazayo noma abasebenzi kuphela ngamaphrojekthi abasebenza kuwo.
Isixazululo esisodwa esikhona ukudala i- mastersheet ebizwa ngokuthi yi- mastersheet futhi, ngosizo lwe- IMPORTRANGE, ukufunda idatha ekhethiwe ukusuka lapho ohlangothini olulodwa. Ngeshwa, lokho kusho umsebenzi omningi wezandla: ukudala amashidi amasha, ukwabela amalungelo wefayela, ukuthuthukisa nokusebenzisa ifomula ye-IMPORTRANGE, ukwamukela imvume, ukusethwa kokufomatha. Uma isakhiwo noma ifomethi ishintsha, lokhu kuzokwenziwa ngesandla kuwo wonke amaspredishithi.
I- Google Apps Script elandelayo yenza lokhu ngokuzenzakalela. Uma usebenzisa indlela ye- init () kanye ku-mastersheet, wonke amashidi ezigqila ayenziwa ngokuzenzakalela, amalungelo abelwa bese amafomula nokufometha kusethwa. Uma idatha kushidi eliyinhloko ishintsha, ibonakala ngokuzenzakalela kushidi lesigqila. Uma ukwakheka kweshidi eliyinhloko kuguquka, mane usebenzise i-init () futhi (amashidi wangaphambilini abuyekezwa ngokuzenzekelayo).